Hashtag Zvekushandisa Zvekutsvagisa uye manejimendi - iro Rizere Rondedzero #Hashtag
Hashtag yaive iyo shoko regore pane imwe nguva, paive ne mucheche anonzi Hashtag, uye izwi rakarambidzwa muFrance (mot-dièse).
Mahashtag anoenderera mberi aine mabhenefiti akakura kana achinge ashandiswa nenzira kwayo musocial media - kunyanya sekushandisa kwavo kwawedzera kupfuura Twitter uye kuFacebook. Kana iwe uchida zvimwe zviyero zve hashtag, ona iyo Hashtag Nhungamiro izvo zvatakaburitsa. Iwe unogona zvakare kuverenga yedu posvo pa kutsvaga akanakisa ma hashtag kune yega yega yekuvandudza magariro.
Ndiani Akapa Hashtag?
Kungofanana neshoko rakakosha kuti uwane ruzivo pamhepo, ma hashtag akakosha futi. Takanyora nezve chii chinonzi hashtag kare. Vanhu nemabhizinesi vanoshandisa ma hashtag kuti vawanikwe, asi vanoshandisawo ma hashtag kutsvaga vamwe vachishandisa matekinoroji ekutsvaga munharaunda.
Hashtag Platform Zvimiro:
Hashtag yekutsvagisa, kuongorora, kuongorora, uye manejimendi maturu ane akawanda maficha.
Hashtag Trending - kugona kubata nekutarisa mafambiro pama hashtag.
Hashtag Alerts - kugona kuziviswa, mune ingangoita chaiyo-nguva, kutaura nezve hashtag.
Hashtag Tsvagiridzo - yakatemwa kushandiswa kwema hashtag uye kiyi inopisa Zvitaure nezvavo.
Hashtag Kutsvaga - kuzivisa ma hashtag uye ma hashtag ane chekuita kuti ushandiswe mune ako enhau enhau kutaurirana.
Hashtag Masvingo - Gadzira chaiyo-nguva, yakarongedzwa hashtag kuratidza kune yako chiitiko kana musangano.
Mamwe emapuratifomu akasununguka uye ane hushoma hunyanzvi, mamwe akavakirwa kushandiswa kwemabhizimusi kunyatso kutyaira ako enhau enhau kushambadzira. Zvakare, kwete zvese zvishandiso zvinotarisisa yega yega media media chikuva mune chaiyo-nguva… saka iwe uchafanirwa kutsvagurudza usati waita mari mune chishandiso chakadai kuona kuti iwe wawana izvo zvaunoda!
Agorapulse - Kunze kwechikwata chakazara chemagariro enhau maturusi, Agorapulse zvakare ine hashtag yekutarisa uye yekuzivisa.
Hashtag yose - Hashtag yese webhusaiti, iyo ichakubatsira iwe kugadzira uye kuongorora nekukurumidza uye nyore epamusoro akakodzera ma hashtag ezvenhau rako rezvemagariro uye kushambadzira. Iwe unogona kuburitsa zviuru zveakakodzera ma hashtag aunongoteedzera nekuteedzera mune ako enhau midhiya
Brand24 - Wana mukana wekukurumidza kutaura nezvepamhepo, kurisa kugutsikana kwevatengi uye kutengesa.
BrandMentions Hashtag Tracker - Mahara Hashtag Ekutevera Maturu Ekutarisa Hashtag Performance.
BuzzSumo - BuzzSumo inoongorora vako vanokwikwidza, marita kutaurwa uye indasitiri inogadziridza. Nyevero dzinoona kuti unobata zviitiko zvakakosha uye usapwanywa pasi pezvemagariro midhiya avalanche.
XNUMX.com iri injini yekutsvaga inotsvaga HASHTAGS (#) pane ako aunofarira vezvenhau mawebhusaiti senge Facebook, Twitter, Instagram, uye Pinterest.
Hashtracking - Curate zvemukati, kukura munharaunda, gadzira mibairo yekuhwina mishandirapamwe & inoshamisa mhenyu midhiya midhiya ekuratidzira.
Vanopenia.me chishandiso chemahara chekutsvaga ma hashtag e Twitter uye hukama hwavo. Iyo ongororo yakavakirwa pane 1% sampling yese ma tweets - iyo yakakwira iyo iyo Twitter inopa mahara.
Hashtags.org inopa ruzivo rwakakosha, kutsvagisa uye sei-kune ruzivo kubatsira vanhu, mabhizinesi nemasangano pasirese kuvandudza yavo yemagariro media branding uye ungwaru.
Keyhole - Tevera ma hashtag, mazwi akakosha, uye ma URL mune chaiyo-nguva. Keyhole's hashtag analytics dashibhodhi yakazara, yakanaka, uye inogovaniswa!
Kwayedza Keyhole Kunze:
RiteTag inotsanangudza maitiro ekutsvaga akanakisa ma tag ekuenda nezviri mukati zvekugovaniswa, achigamuchira yakasarudzika mamaki zvipingamupinyi zvezvakawanda zvakakosha zvemukati-zvekugovana netiweki, kusanganisira Twitter, Youtube, Instagram, Flickr… uye zvimwe zvakawanda.
Tagdef - Tsvaga zvinorehwa nema hashtag, tsvaga ma hashtag ane hukama uye wedzera ako madudziro mumasekondi.
TrackMyHashtag - chishandiso chezvemagariro media analytics iyo inoteedzera zviitiko zvese zvinoitika kutenderedza mushandirapamwe wepaTwitter, inoongorora zviitiko izvi, uye inopa yakawanda yakajeka mazano TrackMyHashtag inokwanisa kuteedzera makwikwi enhau enhau ekukupa miniti yega yega yemusoro wenyaya. Inoburitsa yakawanda ruzivo rwakakosha iyo ingangoshandiswa kuongorora zvinoitwa nechero vezvenhau mushandirapamwe, kuteedzera zvese zvinoitwa nemakwikwi 'ezvematongerwo enyika zano, kana kuita yako wega vezvenhau kushambadzira zano. TrackMyHashtag inoteedzera tweets uye metadata inoenderana nechero kiyi izwi, hashtag, kana @mention, ese ari maviri-enguva uye enhoroondo kune chero nguva yenguva.
UnionMetrics Union Metrics inokupa simba nehukama hwekutengesa hwemagariro iwe hwaunoda kuti usvike kune vateereri vako uye uvake bhizinesi rako.
Mhanya Yemahara Twitter Snapshot Chirevo
Twitter Kutsvaga - vanhu vazhinji vanotarisa kuTwitter kutsvaga kuti vawane maTweets azvino pamusoro wenyaya, asi iwe unogona zvakare kuushandisa kuti uwane maakaunti eTwitter ekutevera Unogona kubaya vanhu uye uone maakaunzi epamusoro eiyo hashtag yauri kushandisa. Inogona zvakare kupa chinangwa chekushandira kana vakwikwidzi vako vakaonekwa kune hashtag asi iwe usiri.
twibs inzvimbo iyo iwe yaunogona kutsvaga chaiko, kunyoresa uye kunyangwe kuisa chiratidzo kune yakatarwa hashtag. Ivo zvakare vane maturusi senge akaenzanisirwa tweet masvingo aunogona kushandisa kune yako inotevera chiitiko kana musangano.
Trendsmap - Unotanga uine maonero enharaunda yako kwaunogona kuona misoro yenyaya. Iwe unogona kupururudza mamepu nekukwevera kune imwe nzvimbo kana kuswededza mukati kana kunze uchishandisa iyo yekuwedzera / kubvisa mifananidzo. Paunoona chimwe chinhu chinotaridza kunakidza tinya pane icho chinyorwa kuti uwane rumwe ruzivo senge mairafu evhoriyamu yetweets munharaunda neepasirese, izvo musoro wenyaya ungangodaro uri pamusoro, mifananidzo, zvinongedzo, uye maTweets achangoburwa. Iwe unogona zvakare kuona kuti ndekupi kumwe musoro wenyaya uyu wakakurumbira nekudzvanya pamusoro wenyaya mukati meratidziro, kana zvimwewo zviri kutaurwa nevanhu panzvimbo ino nekudzvanya pazita renzvimbo.
Geochip - GeoChirp inobatsira iwe kutsvaga vanhu Twittering kune chaiwo zvinhu mune yakatarwa nzvimbo.
Tags: brand24chris Messinakukunda mishumofacebook hashtagtsvaga ma hashtagyekutanga hashtaggeochiptsvakurudzo yeGooglegoogle + hashtaghashatithashtag appskuchengetedza hashtaghashtag kuongororakutsvagisa hashtaghashtag yekutsvaga injinizvishandiso zve hashtaghashtagify.mehashtagspinterest hashtagritetagmusaraseesawkungoyerwazvemagarirotagboardtagdefwemo.detweetreachTwittertwitter hashtagtsvakurudzo ye twittertwitter kutsvagatwibs
Ngatitorei Facebook, semuenzaniso. Bhokisi rayo rekutaura chinhu chakanakira kuti rishandiswe sekuve mutero webasa revatengi. Sezvineiwo, Twitter hashtag inopa yakasarudzika yekumaka sisitimu yekukurukurirana.
Ndatenda nekubatanidza Tagboard - kuvhunduka, kuti ndangosangana neiyi post! Tichiri kusimba uye takashandisa zvinhu gumi nemaviri kubvira zvakatumirwa zvinosanganisira moderation, live mode, nezvimwe… Chiziviso chenezuro paFacebook chakatishamisa! Kunyangwe tanga tichidhonza #hashtags kubva papuratifomu yavo kubva muna Gumiguru, chiziviso ichi chakakurudzira kushandiswa kwe #hashtags paFB & tanga tichiona zvinoshamisa kutora uye sooo zvakawanda zvirimo tichishandisa #hashtag mumaawa gumi nemaviri apfuura.
Jun 22, 2013 na2:43 AM
Great list! Ndatenda nekutumira izvi 😉
Gumiguru 24, 2013 pa 3:01 AM
Ndatenda zvikuru nekubatanidza RiteTag, Douglas, uye kana tichigona G+ video call, ndinoda kumhanyisa zvirongwa zvedu newe; isu tinoda kutama kuti tive hashtag mhedzisiro-yero yekuyera suite.
Yakanakisa Orlando SEO Kambani
Nov 14, 2013 na6:47 AM
Iyi inhau inonakidza "Inoteedzera frequency iyo hashtag inoshandiswa paTwitter uye inopa ruzivo nezve hashtag." yakanaka post…
CEO/Muvambi/Host The Social Network Show
Gumiguru 18, 2014 pa 8:55 AM
zvinonakidza uye zvinobatsira, ndatenda.
Ndinonyatsoda bhurogi rako - Ndechimwe chevashoma vandinotevera mune zvekunamata asi pane chinhu chimwe chandisinganzwisise, nekuti hapana anombotaura izvi - kwete iwe, kwete Buffer.
1. Zvinoita kuti unyorwe (nekuda kwekunyanya kupusa otomatiki zvakanyanya paIFTTT uye iyi "ndizivise" maitiro) -
2. Zvinokuita kuti uwedzere kubatanidzwa asi CHETE nekuda kwebhoti uye automated retweeting.
Kuti ndiedze iyi dzidziso, ndakavaka bhoti isina chayakaita kunze kweretweet Jeff Bullas kwemwedzi ye2 (nokuti vanyori vaJeff vanoshandisa ma hashtag akawanda kupfuura ani nani wandinoziva) uye bot yangu yakanyorwa pamusoro pe1000 nguva UYE ine chiremera chepamusoro chevanhu kupfuura ini. maererano naFollowerwonk! Haateve chero munhu haaite chero chinhu kunze kweRT Jeff Bullas uye #growthhacking. Usanetseke kuvaka runyoro ne #socialmedia kana #emailmarketing - uchawana marara.
Ini handidi kunyorwa nekuda kwe #SSA kana kuwana yakawanda bot kubatikana. Saka IMHO, ma hashtag haawedzere chero kukosha chaiko (kunze kwe Twitter chats uye makonferensi nezvimwe). Ndakanyora chinyorwa nezve izvi paMedium.
Ritetag yakanaka asi kwete nekuti inokupa ari nani hashtag (muchokwadi, ma hashtag avo haakuite iwe kunyorwa). Ritetag yakanaka nekuti inoita kuti iwe uwedzere mapikicha, memes uye magif mumatweets ako zvisina basa.
Zvita 17, 2015 na2:14 PM
Debbie - iro izano rakanaka kune vaverengi vedu. Uye wataura chokwadi - isu tichishandisa Ritetag, kugona kuwedzera mapikicha kwakanakisa. Ini ndakapindwa muropa neanimated gifs!
Zvita 17, 2015 na3:34 PM
Tine zvinopfuura chinhu chimwe chete zvakafanana kupfuura! Ndakapindwa muropa nemagif zvakare. 🙂
Mazano akanaka ekufambisa iyi minefield.
Hapana keyword research yakakwana pasina mazano ekutsvaga, kunyanya kana zvasvika pakutsvaga kwenhare, uko vanhu vanowanzo shandisa izvo kuchengetedza nguva. Ini handina manhamba asi ndinorangarira kuti vashandisi venhare vanodzvanya pamazano ekutsvaga kakawanda uye iwo mazano akasiyana zvakanyanya nemibvunzo yako yenguva dzose. Muenzaniso: https://serpstat.com/keywords/questions/?query=bluetooth+speaker&se=g_us
Nyaya inofadza zvikuru! Ndakaona zvichibatsira zvikuru kune avo vari mumunda weSEO uye Social Media Marketing.
Ndinokutendai zvikuru nokuda kweizvi. Kutarisira zvimwe zvechinyorwa chenyu changamire!
Basa rakanaka! Ndaverenga zvese zvekutaura zvishandiso. Ramba wakadaro!
Ndinokutendai nekugovera ruzivo urwu runobatsira. Sezvauri kutaura nezve hashtag analytics maturusi, pane imwezve yemahara chishandiso chandinoda kukuzivisa kwauri.
Zita rayo https://www.trackmyhashtag.com/ - a hashtag analytics chishandiso. Ndiyo yakanakisa kutora chero mhando yehashtag data mune chaiyo-nguva kubva kuTwitter uye kuiongorora kuti ibudise anobatsira manhamba.
Ndingave nekutenda kana iwe ukatarisa muchishandiso ichi uye nekupa yako yakakosha mhinduro.
Jan 31, 2021 na1:19 PM
Ini ndawedzera chishandiso uye nekuvandudza chinyorwa ichi, ndatenda!
Ndinokutendai nekusanganisira Trackmyhashtag. Ndiri kufara chaizvo kuona 🙂